Nwere Twitter na Channel Channel Gị? | Martech Zone
Ọ bụrụ na m kpọọ ụlọ ọrụ gị na mkpesa ma ọ bụ ajụjụ, naanị onye nnọchi anya gị na-anụ olu m. Ọ bụrụ na m na-ajụ na Twitter, ezie, m 8,000 na-eso ụzọ na-anụ m… na ndị na retweet mụbaa na-ege ntị n'ime ha na netwọk. Twitter na-aghọ ngwa ahịa onye kwuo uche ya nye ndị ahịa chọrọ azịza.
Na-ege ntị na Twitter? Twitter abụghị fad ma ọ bụ ụlọ ọrụ… ọ bụ usoro nkwukọrịta dị mma. Ikwesighi isonye (karia ịzaghachi), mana ị ghaghi ileghara ọwa a dị mkpa anya.
Salesforce weputara mkpokọta Twitter na igwe ojii ọrụ ha (ha nwere njikọta mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ). You maara na ị nwere ike nyochaa Twitter na Ahịa Ọrụ nke Salesforce, na-adọtị mbọ ndị ahịa gị na-agba?
Nabata ụwa nke ejikọtara ọnụ, mgbe niile, na-eche echiche nke ukwuu, na ndị ahịa na-aga n'ihu. Nke a bụ onye ahịa nke ghọtara na ha nwere ike ugbu a. Ha na-atụ anya ugbu a karịa naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'aka gị. Ha na-atụ anya na mmekọrịta dị na nha anya. Ha na-atụ anya ịnọ n’etiti ụwa gị. Ikwesiri itinye ha ebe ahu. Ikwesiri ibu ulo oru ndi ahia.
Ma ọ dịkarịa ala, m ga-akwado ịnweta nri site na a Twitter Search.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaObinna 6ndị ahịaTwittermwekota twitter
Chọta Marketinglọ Ọrụ Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi Zuru Oke
Ọkt 13, 2009 na 3:07 PM
Mgbasa mgbasa ozi abụghịzi ajụjụ maka gịnị, mana olee otu. Daalụ maka ịkwado anyị dị ka ngwa ige ntị na itinye aka.
Onye njikwa obodo na Radian6